नसुनिएका आवाजहरु Archives - VON TV
धनगढी। कैलालीको दुई अनाथ बालबालिका सहाराको खोजीमा छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–१ ओमशान्ति टोलका १० वर्षीया प्रशंसा पुरी र सात वर्षीय तेजबहादुर पुरी समस्यामा परेका हुन । तीन वर्ष अगाडि उनीहरुको बुबाको मृत्यु भएको थियो । बुबाको मृत्यु भएको एक वर्षपछि उनीहरुको आमा पनि दोस्रो विवाह गरेर अन्तै गएको स्थानीयले जनाएक...
बाको लासमाथि खेलेको त्यो पल
हेमन्त विवश जिन्दगीको आधा बाटो कटिसक्यो। उनीभित्र जम्मा भएका सोचाइका पलहरू भने हुन सकेका छैनन् आधी। दिमागमा सलबलाउन छोडेनन् कल्पनाका रेशाहरुले । मौनतामा बसेर कुनै न कुनै पलमा प्रायजसो सोचिरहन्छन्– कस्तो थियो होला बाको अनुहार। भक्कानो उठ्छ उनको मनमा अझै पनि आमाले सुनाएको त्यो कथा सम्झिदा। २४ वटा एल्बम प्रकाशित ग...
‘दलित भन्दै मन्दिरमा व्रतबन्ध गर्न दिइएन’
बागलुङ । बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका–१, दुदिलाभाटी एक शिवालयमा दुईजना बालक दलित भएकै कारण व्रतबन्ध गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । आइतबार स्थानीय १२ बर्षीय जुम्ल्याहा भाइहरु लोकबहादुर सुनार र कर्णबहादुर सुनारलाई विशेष कारणले मन्दिरमा ब्रतबन्ध गर्न लगियो, तर मन्दिरका पुजारी बलाराम सुवेदीले आशयपूर्ण ढंगले मन्दिरको ढोक...
महीनादेखि ६५ बर्षीय वृद्धको ओढारमा बास
म्याग्दी । ओढारको तलपट्टी बर्खे भेलले उर्लेको खोला, बीचमा खेत र खेतको माथिल्लो पट्टी एउटा सानो ओढार । त्यही ओढारमा अत्यन्त टीठ लाग्दो अवस्थामा भेटिन्छन् ६५ वर्षीय हिराबहादुर पूर्जा । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ तिप्ल्याङका हिराबहादुर विगत एक महीनादेखि ओढारमा बस्दै आउनुभएको छ । घरजग्गा केही नभए...
जो मुख, कुहिना र खुट्टाले लेख्छन् !
काठमाडौं । ‘छोरालाई निकै महत्पूर्ण दिने सुदूपश्चिमेली समाजमा म जन्मिँदा भने बाआमाका अनुहारमा खुसी थिएन अरे,’ उनले भने, बोझ भएर जन्मिएकामा उहाँहरु हैरान हुनुभएछ ।’ उनी अर्थात नन्दराम भट्ट जन्मिँदै अपांगको सिकार बने । उनका हातखुट्टा पूर्ण थिएनन् । हात कुहिनासम्म र खुट्टा घुडाँसम्म मात्रै थिए । त्यतिबेला छिमेक...
ऋण नतिरेको भन्दै बैंकले भैँसी नै उठाएर लग्यो, कृषकको बिचल्ली !
- डिबी बुढा, जुम्ला। गत वर्षको असार १० गते जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका ७ मिचा गाउँका दत्त सार्कीले स्वावलम्बन बैंकबाट ८० हजार रुपैयाँ ऋण निकाले।त्यो ऋण भैँसी खरिद गर्नको लागि निकालेका थिए। बैंकले पैसा दिए पछि भैँसी पनि खरिद गरे। उनको चाहाना थियो,‘भैँसीको दुध बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्ने, परिवारको खर्च सहजै रुपमा चल...
साउदी जेलमा रहेका चौधरीको रिहाईका लागि ३८ लाख १५ हजार ‘ब्लड मनी’ हस्तान्तरण
काठमाडौँ । विगत ३० महिनादेखि साउदी अरेबियाकोे जेलमा रहेका चितवन खैरहनी नगरपालिका–१० गुठौलीका जलेश्वर चौधरीलाई रिहाई गर्नको लागि सामाजिक स्वयंमसेवक नेपाल मिसन चितवन र मिसन झापाको नेतृत्वमा संकलित ३८ लाख १५ हजार रकम पीडितका बुवा सुकरा महतोलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । संस्थाद्वारा संकलन गरिएको उक्त ‘ब्लड–मनी’ सा...
हावाहुरीबाट विस्थापित तिन बहिनीको कारुणिक कथा !
धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ उर्मीमा हावाहुरीबाट विस्थापित बालिकाहरुको अवस्था देखेपछि युवा व्यवसायी शुभ ठाकुर स्तब्ध भए । हावाहुरीले घरको पुरै नक्सा बिगारेको थियो । छाना आधा खुला थियो । आधा छाना हुरीले उडाएको थियो । धुरीमा पंखाको डल्लो मात्र थियो । पाताहरुलाई हुरीले उडाएर कहाँ पुर्यायो , पत्तो छैन । ह...
-आरके जी रिक्सा गुडाएको आधा शताब्दीमा उनले ठूलो प्रगति गरेनन् तर मागेर खानुपरेको छैन । बीसको दशकमा एक जनाको भाडा सुका मोहर थियो । उनी हनुमानढोकाबाट असनको १० मोहर, सिंहदरबारको २० मोहर, ठमेलको १५ मोहर, लाजिम्पाटको २५ मोहर थियो । अहिले क्रमशः १२०, १५०, २०० रुपैयाँसम्म लिन्छन् । काठमाडौंको वसन्तपुर डबली अगाडि १५ वटा ...
सरकारको राहत कागजमै सिमित : ४ वर्ष बित्यो, बाँकेका बाढी पीडितले पाएनन् राहत
काठमाडौँ। साढे चार वर्षदेखि राहत रकमका लागि दौडधुप गरिरहेका बाँकेको राप्तीपारिका एक हजार बढी बाढी पीडितले अझै राहत रकम पाएका छैनन् । पटक पटक राहतका लागि सदरमुकाम धाउँदै आए पनि सरकारी उदासिनताका कारण जिल्लाका बाढीपीडितले करिब साढे चार वर्षदेखि राहत रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । २०७१ सालका बाढी पीडितल...